PALAUNG NATIONAL SOCIETY - JAPAN: October 2011
ကျွန်တော်တို့၏ ကံကြမ္မာကို လောင်းကြေး ထပ်ထားရသော ကစ...
ကြောင်လိုလို ကြွက်လိုလို လုပ်မနေနဲ့ (မောင်ဝံသ)
ကေအိုင်​အေကို အစိုး​ရစစ်တပ်က ဓာတုလက်နက်ဟုယူဆရသည့်​...
အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရာထူးမြန်မာပြည်ရရေး ထောက်ခံမည်ဟု အင်ဒိုန...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်နိုင်တ...
တိုက်ပွဲဝင် သူရဲကောင်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို တ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဦးအောင်ကြည်တို့ တိုင်းရင်း...
ဒီပဲယင်း နိုင်ငံတော်လုပ်ကြံမှု လ(၁၀၁)ပြည့် ၀မ်းနည်း...
စုပေါင်းဘုံကထိန်နှင့် ပထမအကြိမ် သက်ကြီး ပူဇော်ပွဲ...
မြန်မာနိုင်ငံမှာ သိသာထင်ရှားတဲ့ ပြောင်လဲမှုတွေ မရှ...
NLD ပါတီ မှတ်ပုံတင်ရေး မကြာမီ ဆုံးဖြတ်မည်
ကေအိုင်အို ၅၁ နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ပြုလုပ်
ရေကမ္ဘာ ဘန်ကောက်နဲ့ မြန်မာပြည်သားများ
K.I.A နှင့် စစ်အစိုးရ စစ်တပ်တို့အကြား တိုက်ပွဲ ဖြစ...
နေပြည်တော်အစိုးရအား သျှမ်းတပ်နှစ်ဖွဲ့ ပူးပေါင်းဆွေ...
အလစ် ၀င်ရောက် ပစ်ခတ်မှုကြောင့် အစိုးရတပ်ဖွဲ့ဝင် ၃ဦ...
ဆွမ်ပရာဘွမ်အနီး KIA ၏ တိုက်ခိုက်မှုတွင် မြန်မာစစ်သာ...
ဒုတိယ ပင်လုံ ညီလာခံဟာ ပြည်ထောင်စုရဲ့လိုအပ်ချက် ဖြစ...
ရခိုင်လူမျိုးများ ဗြိတိသျှ သံရုံးရှေ့ ဆန္ဒပြရန် လှုံ...
ဘီဘီစီ မြန်မာပိုင်းဌာနမှ လူတွေ ဒီဆောင်ပါးနှင့်ဓါတ်...
U Win Tin – မှတ်ပုံတင်မလား၊ မတင်လား … ကောလဟာလ
မြန်မာစစ်သား ပစ်ခတ်မှု တွင် ကိုယ်ဝန်နှင့်ကျောင်း ဆရ...
စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှု ရုပ်သိမ်းရန် စောသေးကြောင်းေ...
ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်မြောက်ရေးေ က်ာမရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ပြည်တော်ြ...
ကိုဇာဂနာရဲ့ နိုင်/ကျဉ်း ကူညီရေး ခရီးစဉ် - သာယာဝတီ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ရာစုနှစ်အထိမ်းအမှတ် စကာြးေ...
မစ်ရှီဂန်တက္ကသိုလ် Wallenberg ဆု ဒေါ်စုကိုချီးမြှင့်
ထိုင်းက တိုင်းပြည် ပျက်သလောက် ဖြစ်နေပြီ ။ လယ်တွေပျ...
ကချင်ဒေသခံ အမျိုးသမီး ၉ ဦး မတရားပြုကျင့် အသတ်ခံရ
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်နဲ့ VOA တွေ့ဆု...
ပြည်သူလူထု၏ အသက်၊ အိုးအိမ်၊ စည်းစိမ်၊ ကျွဲနွား အား...
(RHQ)Refgees Head Quarter အကြိမ်(၃၂)မြောက် ချစ်ကြည...
(၁၂)ကြိမ်မြောက် မြန်မာ့ရိုးရာသီတင်းကျွတ်ပွဲတော် ဂျ...
ABMAဂျာနယ် Volume 2. No 20
မြန်မာအစိုးရ၏ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင...
ဂါးရာယန်တိုက်ပွဲတွင် မြန်မာအစိုးရတပ် အရာရှိ ၃ ဦး ကျ
လိုင်ဇာအနီး အစိုးရတပ်များ တိုးမြှင့်ချထား
ကဒါဖီ ကို အသေ ဖမ်းမိပြီ
ကချင် တိုက်ပွဲ တွေကြောင့် တရုတ် စိုးရိမ်
မြန်မာတပ်အချင်းချင်းမှားပစ် ၆ ယောက်ထက် မနည်းသေ .
တနှစ်ခွဲ ကချင် ကလေးငယ် အား မြန်မာအစိုးရတပ်မှပစ်သတ် .
ပါတီမှတ်ပုံတင်​ရေး​ကိစ္စ ပြန်လည်ဆန်း​စစ်မည်ဟု စီအာပ...
အစိုးရစစ်တပ် ကေအိုင်အေဌာနချုပ်နဲ့ ၁၀ မိုင်အကွာ ရော...
ခ၀န်ဘန် နံနက်တိုက်ပွဲတွင် မြန်မာစစ်သား ၃ ဦး သေ
ဂျပန်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် မင်းကိုနိူ​င်ရဲ့ (၄၉)...
မြန်မာအပေါ် ပိတ်ဆို့မှုတွေ ဗြိတိန် ရုပ်သိမ်းဦးမည်မဟုတ်
မစုစုနွေး ပြောပြတဲ့ ထောင်တွင်းအတွေ့အကြုံများ(ရုပ်/သံ)
ကေအိုင်အိုနှင့် အစိုးရတပ် တိုက်ပွဲများ ယခင်လထက် နှ...
မြန်မာအတွက် ODA အကူအညီ ဂျပန် ပြန်ပေးမည်
ဘဘကြီးဦးတင်ဦးကို စော်ကားပြောဆိုခဲ့သူ ဒေါက်တာဝါကာ...
သမိုင်းအစဉ်အလာ ကြီးမားပြီး သက်တမ်းနှစ်ပေါင်း ၁၂၁ န...
အပြောင်းအလဲဖြစ်ပြီ မဖြစ်သေးဘူးဆိုတာ ပြည်သူတွေရဲ့လက...
ဒီပဲယင်း လူသတ်မှုကို ဖွင့်ချခဲ့လို့
ကရင်နီနှင့်အစိုးရတပ်တို့၏ တိုက်ပွဲ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်က...
မြန်မာစစ်တပ်နှင့် KIA ကြား မြစ်ကြီးနား-ဗန်းမော် လမ...
အကျဉ်းထောင်မှ လွတ်မြောက်လာသော ဇာဂနာအား ဒေါ်အောင်ဆန်...
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား အားလုံး ချက်ချင်းလွှတ်ဖို့ AIP...
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများ ပထမအကြိမ် ဂါရ၀ပြုကန်...
မလေးရှားတွင် တိုင်းရင်းသား ပေါင်းစုံ လက်တွဲ၍ ရွှေဂတ...
မလွတ်မြောက်သေးတဲ့ ညီတယောက်အတွက် ဇာဂနာရဲ့ ကဗျာတပုဒ်
ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ အပြောနဲ့အလုပ် မညီကြောင်း မစုစု...
လွတ်လာတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ဘ၀ ထူထောင်နို...
ရန်ကုန်လေဆိပ်မှာ ဇာဂနာကို ကြိုဆိုကြပုံ (ရုပ်သံ)
မြန်မာတိုင်းရင်းသားများ မလေးရှားနိုင်ငံရှိ မြန်မာသ...
တိုက်ပွဲတွင် ဒဏ်ရာရ​သော ရှမ်း​စစ်သား​ ထူး​ခြား​သော...
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အကျဉ်းသား ၆,၀၀၀ ကျော်ကို လွတ်ငြိ...
အစိုးရတပ်နှင့် ဒီကေဘီအေကြား တရက်တည်း တိုက်ပွဲ ၃ ကြ...
အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်မှ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ၏ အိတ...
AUN ၏ အလုပ်အမှုဆောင် အစည်းဝေးနှင့် ဦးခွန်ထွန်းဦး ...
အစိုးရ၏ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖိတ်ခေါ်မှု UNFC သံသယရှိ
ကရင်တကျပ် ဗမာ ၇ ကျပ်
အစိုးရရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး မူမမှန်ဟု မွန်ပြည်သစ်ပါတီ...
နိုဘဲလ်ဆု ကို အမျိုးသမီး သုံး ဦး ဆွတ်ခူး (ယီမင် လ...
တရုတ်ကို ပထမဆုံးအကြိမ် ငြင်းဆန်ကြောင်း မြန်မာ မောင...
ရွှေဂက်စ် စီမံကိန်း​ကိုလည်း​ ရပ်တန့်​ပေး​ရန် ​တောင်...
ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆု စာရင်းမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြ...
မုန်းကို တွင် မြန်မာအစိုးရ စစ်ကြောင်းအား KIA ခြုံခ...
ကျွန်တော်တို့၏ ကံကြမ္မာကို လောင်းကြေး ထပ်ထားရသော ကစားပွဲ
USDA & ASSK
ကြံ့ဖွံ့ အစိုးရ ၊ NLD နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့၏ သေနင်္ဂဗျူဟာမြောက် ရွှေ့ကွက်များ
အများပြည်သူက ရွေးကောက် တင်မြှောက်ထားသည့် အစိုးရဟု မိမိကိုယ်ကိုယ် တွင်တွင် ကြော်ငြာ နေသော ကြံ့ဖွံ့ အစိုးရနှင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တို့ကြား နိုင်ငံရေး စစ်တုရင် ကစားပွဲမှာ ယခုအခါ အတော်ပင် ဇာတ်ရှိန်တက် နေ လေပြီ။ ကြည့်ရှုရသော ပရိသတ် အဖို့မှာလည်း အသည်းတယားယား၊ ရင်တဖိုဖို ဖြစ်ကြရသည်။ အဘယ်ကြောင့် အသည်းယား ရသနည်း ဆိုပါမူ ကျွန်တော်တို့သည် သာမန်ပွဲကြည့် ပရိသတ်မျှသာ မဟုတ်ဘဲ၊ ပွဲ၏ အနိုင်အရှုံး ရလဒ်အကျိုးကို ကျကျနန ခံစားကြရမည့် သူများလည်း ဖြစ်နေသောကြောင့်ပင်။ သည်ပွဲသည် သာမန် ကစားပွဲမဟုတ်။ ကျွန်တော်တို့၏ ကံကြမ္မာကို လောင်းကြေး ထပ်ထားရသော ကစားပွဲဖြစ်နေလေသည်။
ယခု အချိန်တွင် အများပြည်သူ အတွက် မျက်စိလည်စရာ ကောင်းလောက်အောင် ကစား ကွက်ရှုပ်ထွေး လှပေသည်။ အမှန်တကယ်ပင် မျက်စိလည်သူ အကြည့်မှားသူတွေလည်း တော်တော်ပင် များပြား နေလေသည်။ အဘယ်ကြောင့် ထိုသို့ အမြင် ရှုပ်ထွေးကြပါသနည်း။ ရွှေ့ကွက်များမှာ ယခင်ကနှင့် မတူ တမူ ထူးခြားနေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ယခင်က စစ်အစိုးရသည် အကြမ်းနည်း သက်သက်ကိုသာ အသုံးပြုသည်။ စစ်အစိုးရကို ဆန့်ကျင်တာ ဘာမှ မရေးရ။ ဘာမှ မပြောရ။ ဘာမှ မလုပ်ရ။ ထိုကဲ့သို့ လုပ်ရပ်တခုခု လုပ်လျင် ထောင်သွင်း အကျဉ်းချမည်။ လမ်းပေါ် မထွက်ရ။ ဆန္ဒမပြရ။ လမ်းပေါ်ထွက် ဆန္ဒပြလျင် ပစ်သတ်မည်။ လမ်းပေါ်ထွက် ဆန္ဒပြ သော လုပ်ရပ်သည် (လက်နက်ကိုင် တော်လှန်သော အလုပ်မှ တပါး) စစ်အစိုးရ အဆက်ဆက်အဖို့ အကြောက်ဆုံး လုပ်ရပ် ဖြစ်သည်။ အတိုချုပ် ပြောရလျင် ထောင်ချလိုက်မည်နှင့် သတ်ပစ်လိုက်မည် ဆိုသော နည်းများမှာ စစ်အစိုးရ၏ အဓိက နည်းဗျူဟာ ဖြစ်ခဲ့သည်။
၂၀၀၇ ခုနှစ် သံဃာ့လှုပ်ရှားမှု နောက်ပိုင်းတွင်မူ စစ်အစိုးရ၏ မဟာဗျူဟာ စတင် ပြောင်းလဲလာသည်။ ၁၉၈၈ နောက်ပိုင်းတွင် အကြီးမား ဆုံးသော လှုပ်ရှားမှုကြီး ဖြစ်သည့် ၂၀၀၇ လှုပ်ရှားမှုသည် စစ်အစိုးရကို အကြီးအကျယ် တုန်လှုပ်စေခဲ့သည်။ စစ်အစိုးရအနေနှင့် အနှစ် နှစ် ဆယ်ကျော်ကြာ ကျင့်သုံးခဲ့သော အချိန်ဆွဲလိမ်ညာ၊ လှည့်ဖျား၊ ထောင်ချ၊ လူသတ်အလုပ်သည် ရေရှည်ဆက်သွား၍ အလုပ် မဖြစ် နိုင် တော့ဟု သဘောပေါက်လာခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ၂၀၀၇ ခုနှစ် အရေးတော်ပုံပြီးသည်နှင့် အခြေခံ ဥပဒေတွေ၊ ရွေးကောက်ပွဲတွေကို သွက်သွက်လက်လက် အကောင်အထည် ဖော်တော့သည်။ ယခင်က နှစ်ပေါင်း တရာကြာအောင်ပင် အချိန်ဆွဲတော့မည်ဟု ထင်ရသော လမ်းပြမြေပုံမှာ ရုတ်တရက် အရှိန်ရပြီး သွက်လက် မြန်ဆန်လာသည်။
ဤသို့ဖြင့် အခြေခံဥပဒေ တရပ်ထွက်ပေါ်လာသည်။ သို့သော် ထိုအခြေခံ ဥပဒေမှာ ကမ္ဘာ့သမိုင်းတွင် ဒီမိုကရေစီ မကျဆုံးသော အခြေခံ ဥပဒေတရပ် အဖြစ် ပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ စစ်သား တမတ်သားက မည်သူမျှ မရွေးကောက် ပဲ လွှတ်တော်ထဲတွင် မိန့်မိန့်ကြီး ကြိုတင် နေရာယူနိုင်သော အခွင့်ကို ပေးအပ်ထားသည်။ စစ်တပ်က မကြိုက်လျင် အချိန်မရွေး အာဏာ သိမ်းခွင့်ကိုလည်း ပေးထားသည်။ ထို အခြေခံ ဥပဒေမှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပြည်သူ့ဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပခွင့် ရခဲ့လျင် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းမျှပင် ထောက်ခံမဲ ရနိုင်စရာ မရှိသော်လည်း သေနတ်မိုး ဓါးမိုးပြီး ၉၂ ဒသမ ၄ ရာခိုင်နှုန်းက ထောက်ခံသည်ဟု မဲခိုး ကြေငြာပစ်လိုက်သည်။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်၏ ဦးဆောင်နိုင်မှု အရည်အချင်း
ထိုကဲ့သို့သော အရေးကြီးသည့် သမိုင်းကာလများတွင် အမျုိးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်သည် ဘယ်နေရာ ဘယ်အခန်း ကဏ္ဍကနေ ရပ်တည် ခဲ့ပါသနည်။ တိုင်းပြည်အတွက် အလွန် အရေးကြီးလှသော ၂၀၀၇ ခု အရေးတော်ပုံနှင့် အခြေခံဥပဒေ ဆန္ဒ ခံယူပွဲကာလ နှစ်ခုစလုံးတွင် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်မှာမူ
စစ်အစိုးရ စစ်တပ်မှ K.I.A ကို ဓာတု လက်နက်အသုံးပြု နေပြီ
In K.I.A civil war, Burmese Soldiers are using Chemical Weapons
အောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက် ကချင် လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် K.I.A နှင့် စစ်အစိုးရ စစ်တပ်တို့ အကြား (၆) ရက်ကြာ တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားလာတဲ့ ကချင်ပြည်နယ် ဂါးရာယာန်၊ ရွှေညောင်ပင်၊ လုန်ဇဲပ်၊ (Lung Zep) ကုန်း တိုက်ပွဲ နေရာများတွင် စစ်အစိုးရ စစ်တပ် ဘက်မှ အကျအဆုံး များလာမှုကြောင့် UN မှ ပိတ်ပင် ထားတဲ့ (Chemical Weapon) ဓာတုလက်နက် များကို ယခု K.I.A နှင့် တိုက်ပွဲမှာ အသုံးပြုနေကြောင်း စုံစမ်း သိရှိရပါတယ်။ ယင်းဓါတုလက်နက် ဓာတ်ငွေ့ ရှိုမိတဲ့ K.I.A တပ်သား (၁၀) ကျော်ဟာ တခါတည်း ခေါင်းမူးလာပြီး အဆက်မပြတ် အန် ခြင်း၊ ကိုယ်ခန္ဓာ ပျော့ခွင်သွားပြီး ဆက်လက် တိုက်ပွဲ မဝင်နိုင်တော့ ကြောင်း ရှေ့တန်း K.I.A သတင်းမှ သိရှိရပါတယ်။
တဆက်တည်းမှာဘဲ အောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက် မနေ့ကလည်း K.I.A စစ်ဌာနချုပ် လိုင်ဇာနှင့် သိပ်မဝေးတဲ့ အင်သပ်တောင် တိုက်ပွဲမှာလည်း စစ်အစိုးရ စစ်တပ်ဘက်မှ ကျဆုံးမှု များလာတာနဲ့ အမျှ စစ်အစိုးရ စစ်တပ်ဘက်မှ (Chemical Weapon) ဓါတု လက်နက်ဖြင့် K.I.A စစ်တပ်ကို ပစ်ခဲ့ရာ K.I.A စစ်သည်တော် (၄) ဦးဟာ ဆက်လက် တိုက်ပွဲ မဝင်နိုင်တော့ဘဲ တကိုယ်လုံး ပျော့ခွင် သွားပြီး အဆက်မပြတ် အန် နေကြောင်း K.I.A ရှေ့တန်း နယ်မြေ တိုက်ပွဲ ဝင်နေတဲ့ K.I.A စစ်သားများမှ သတင်းပေးပို့ လာပါတယ်။
ဘယ်လို အမျိုးအစား ဓါတုလက်နက် ဖြစ်တယ်ဆိုတာ အတိအကျ မသိပေမယ် အဆင့်မြင့်တဲ့ ဓါတု လက်နက် ( Chemical Weapon) ဟုတ်တယ် ဆိုတာကို တော့ ငြင်းလို့ မရဘူးလို့ K.I.A ရှေ့တန်း အရာရှိများမှ ပြောကြား လာပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး ယခုချိန်မှာ UN က နေပိတ်ပင်ထားတဲ့ ဓါတုလက်နက် ဖြင့် စစ်အစိုးရ စစ်တပ်မှ အသုံးပြု တိုက်ခိုက်နေခြင်းကို UN အပါအဝင် တမ္ဘာလုံးက ဒီတိုင်း ကြည့်နေလို့ မဖြစ် တော့ကြောင်း အသိပေး လိုက်ချင်ပါတယ်။
Now fighting with Kachin Independence Army K.I.A and Burmese Military soldiers are stronger and stronger, the war zone Gara Yang, Shwe Nyong Pin, Lung Zep become6days.. so Burmese military soldiers are using Chemical Weapon. When Burmese military soldiers shot Chemical Weapon to K.I.A who touch that gas cannot fight anymore, suddenly they feel headache and the whole body become weak.
And all so, yesterday in the war zone Intap Bum , Burmese military soldiers used Chemical Weapon . So, after breath that gas K.I.A (4) soldiers were suddenly feel headache and the whole body became weak if so they cannot shot anymore, the K.I.A officer confirm this event.
သတင်းရင်းမြစ် - မိုးအိမ်မက်
Posted by PNSjapan at 5:02 PM0comments
မောင်ဝံသ ၊ ၊ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံများက လွှတ်တော်တွေမှာ အဓိက အာဏာရ ပါတီနဲ့ ယင်းရဲ့ မဟာမိတ်များ၊ အဓိက အတိုက်အခံပါတီနဲ့ ယင်းရဲ့ မဟာမိတ်များဆိုတာ ရှိစမြဲပဲဗျ။ အတိုက်အခံတို့ဘာတို့ ပြောမနေပါနဲ့၊ လွှတ်တော်ထဲမှာ ပါတီတွေ ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ တိုင်းပြည်အကျိုးရှိမယ့် ကိစ္စတွေမှာ စည်းစည်းလုံးလုံး ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် သွားရအောင်လို့ ပြောရင် အဲဒါဟာ စိတ်ကူးယဉ်တာပဲ ဖြစ်မယ်လို့ ကျွန်တော် ပြောချင်သဗျ။ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီဟာ နာမည်အတိုင်းပဲ ပါတီစုံ ဖြစ်ရမယ်။ အသွင်သဏ္ဍာန်ရော အနှစ်သာရပါ တစ်ပါတီပုံစံ လုံးဝ မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ စဉ်းစားမိပါတယ်။
ဆိုလိုတာက လွှတ်တော်တွင်း ရောက်နေတဲ့ နိုင်ငံရေး ပါတီတွေအားလုံး တစ်သံတည်း ထွက်ဖို့၊ တစ်ခုတည်းသော သဘောထားတွေ ဖော်ထုတ်ဖို့ ဆိုတာ မဖြစ်လည်းမဖြစ်နိုင်၊ မဖြစ်လည်း မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ ပြောချင်တာပါ။ မဖြစ်နိုင်ဘူး ဆိုတာကိုတော့ အထူး ရှင်းပြစရာလိုမည် မထင်ပါ။ မဖြစ်သင့်ဘူးဆိုတာကို နည်းနည်း ရှင်းပြချင်ပါတယ်။
ဖဲဝိုင်းအိမ်ဖြည့်လို ပါတီစုံဒီမိုကရေစီရဲ့ အနှစ်သာရ တစ်ခုက မတူကွဲပြားသော အမြင်များကို ဖော်ထုတ် တင်ပြ ဆွေးနွေးကြပြီး နောက်ဆုံးမှာ မဲခွဲ ဆုံးဖြတ်၊ အများဆန္ဒကို အနည်းစုက လက်ခံ၊ အနည်းစုရဲ့ ဆန္ဒကို အများက လေးစားသမှုပြုရမှာ ဖြစ်တယ်ဗျ။ အဲဒါကြောင့် လွှတ်တော်ထဲမှာ အမတ်နေရာ အင်အားဟာ ၆၀း ၄၀နှုန်းလောက် ရှိနေရင် အကောင်းဆုံးပဲလို့ နိုင်ငံရေး သိပ္ပံကျမ်းတချို့မှာ ဖတ်ဖူးပါတယ်။
သဘောကတော့ အာဏာရပါတီ + ယင်းရဲ့ မဟာမိတ်များ ပူးပေါင်း အင်အားဟာ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း လောက်ဆိုရင် ကောင်းတယ်။ အဓိက အတိုက်အခံပါတီ + ယင်းရဲ့ မဟာမိတ်များ အင်အားဟာ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်း လောက်ဆိုရင် ကောင်းတယ်။ စင်ကာပူလို ၈၀း ၆ အချိုးလောက် ဖြစ်နေရင်တော့ တစ်ပါတီ အာဏာရှင်စနစ်နဲ့ ဘာမှ မထူးဘူးလို့ ပြောစရာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အတိုက်အခံ ဆိုတာ ဖဲဝိုင်းတစ်ဝိုင်းမှာ အိမ်ပြည့်အောင် ထည့်ပေးထားတာနဲ့ မခြားနားတော့ပါဘူး။
အ​မြောက်ကျည် ကျ​ရောက်​ပေါက်ကွဲတာ​ကြောင့်​ ​ကေအိုင်​အေစစ်​ကြောင်း​ကို တာဝန်ယူ​နေရတဲ့​ သူကိုယ်တိုင် ​ဝေဒနာ ခံစား​ရလို့​ စစ်​ကြောင်း​တခုလုံး​ ဆုတ်ခွာ​ ပေး​ခဲ့​ရတယ်လို့​ ​ကေအိုင်​အေတပ်မှူး​ လမိုင်လှနူး​က ​ပြောပါတယ်။
Posted by PNSjapan at 4:17 PM0comments
အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရာထူးမြန်မာပြည်ရရေး ထောက်ခံမည်ဟု အင်ဒိုနီးရှား အရိပ်အမြွက်ပြော – Indonesia hints at support for Burma ASEAN chair
ယမန်နေ့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးတို့ တွေ့ဆုံကြသည်
အာဆီယံ ဥက္ကဋ္ဌရာထူးနှင့် ပတ်သက်ပြီး မြန်မာပြည် လေ့လာရေးခရီး ထွက်ခဲ့သော အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး Marty Natalegawa က မြန်မာပြည်အတွင်း နိုင်ငံရေးအရ ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှု အခြေအနေများကို ကြိုဆိုလိုက်သည်။
“မြန်မာပြည်မှာ အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်နေပြီး ဒီအပြောင်းအလဲတွေဟာ ထူးခြားတယ်လို့ ထင်ပါတယ်” ဟု Marty Natalegawa က စနေနေ့တွင် သတင်းထောက်များကို ပြောသည်။
အင်ဒိုနီးရှားသည် လက်ရှိ အာဆီယံအသင်း၏ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သည်။
“တခြား အာဆီယံ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး တွေကိုလည်း ကျနော့်အမြင်တွေ ပြောပြသွားမှာပါ” ဟု သူက ဖြည့်စွက် ပြောလိုက်သည်။ သူက သမ္မတဦးသိန်းစိန် အပါအ၀င် အစိုးရခေါင်းဆောင်များ၊ ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားမှု ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ဒီမိုကရေစီသို့ ရှေ့ရှုသည့် အပြောင်းအလဲများ ထပ်မံ တွေ့ရပါက မြန်မာပြည် အာဆီယံ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်ရေးကို ထောက်ခံ နိုင်မည်ဟု တွေ့ဆုံပွဲ အပြီးတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောသည်။
“မြန်မာပြည်သူတွေ၊ အာဆီယံ ဒေသတွင်းက ပြည်သူတွေ ၀မ်းမြောက်စေမယ့် အဖြေတခု ရဖို့ မျှော်လင့် နေပါတယ်လို့ သူ့ကို ပြောလိုက်ပါတယ်။ သူတို့ ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လို ဆောင်ရွက်နေတယ် ဆိုတာကို သူကလည်း ရှင်းပြပါတယ်” ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောသည်။
(မိုးမခက AFP သတင်းကို ဘာသာပြန်ထားခြင်း ဖြစ်သည်)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်နိုင်တယ်လို့ ဦးဥာဏ်ဝင်း ပြောဆို
ပြည်သူ့လွှတ်တော်က ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ဥပဒေတချို့ကို ပြင်ဆင် လိုက်တာကြောင့် NLD ပါတီ အနေနဲ့ ပါတီမှတ်ပုံတင်ဖို့ အလားအလာတွေ ရှိနေပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေနဲ့လည်း လာမယ့် ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲကို ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ဖွယ် ရှိတယ်လို့ NLD ပါတီ ပြောခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ် ဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောပါတယ်။
NLD ပါတီက ကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပါ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေထဲက အချက်တချို့ကို လွှတ်တော်ကနေ ပြင်ဆင်ချက် ပေးလိုက်ပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် NLD ပါတီ အနေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်မှာ မှတ်ပုံတင်ဖို့ အလားအလာတွေ ရှိနေတာလို့ သိရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီဆောင်ရွက်မှုအတွက် NLD ဗဟိုကော်မတီ အစည်းအဝေးမှာ ဆုံးဖြတ်ဖို့ ရှိတယ်လို့ ဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပါတီတွင်း သဘောထား ကွဲပြားမှုတွေ ပေါ်ပေါက်နိုင်ပါသလားလို့ မေးမြန်းတဲ့အခါ ဦးဥာဏ်ဝင်းက - အမှန်ပြောရရင် ပါတီတွင်းမှာ သဘောထားကွဲပြားမှု ရှိကြောင်း၊ ဒါပေမယ့် ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှာတော့ အားလုံး အညီအညွတ် ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုပါတယ်။
Posted by PNSjapan at 11:10 PM0comments
တိုက်ပွဲဝင် သူရဲကောင်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို တာမွေ ဒီချုပ်ရုံးမှ ကြိုဆို
ဒီနေ့ တာမွေမြို့နယ် ဒီချုပ်ရုံးမှာ တာမွေမြို့နယ်မှ ပြန်လွတ်မြောက်လာတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေကို ကြိုဆိုပွဲ လုပ်တယ်။ ကိုနေကျော်၊ ကိုကြည်လွင်၊ ကိုမင်းဟန်၊ ကိုသက်ဦး၊ ကိုမိုးထက်လျှံ၊ ကိုမျိုးလှိုင်၊ ကိုစောသက်ထွန်း၊ ကိုဇော်ရဲဝင်း တို့ကို ဂုဏ်ပြု ကြိုဆိုခဲ့တယ်။ ကိုမျိုးလှိုင်က မအားလို့ သူက လွဲလို့ ကျန်တဲ့လူတွေ အကုန်လာတယ်။ အခမ်းအနားကို ၉ နာရီမှာ စတယ် ၁၁ နာရီမှာပြီးတယ် ခေါက်ဆွဲကြော်နဲ့ ဧည့်ခံတယ် အအေးတိုက်တယ် တာမွေမြို့နယ်မှ ဒီချုပ်ပါတီဝင် တွေနဲ့ ကျောင်းသားလူငယ်တွေ တက်ရောက်တယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဦးအောင်ကြည်တို့ တိုင်းရင်းသားအရေးနှင့် လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာခွင့်ကိစ္စ ဆွေးနွေး
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ​ အဖွဲ့ချုပ် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်ကြည်တို့ ဒီနေ့ တွေ့ဆုံရာမှာ တိုင်းရင်းသား​ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေနဲ့ ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိဖို့ ကိစ္စနဲ့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပေးသင့် သူများကိစ္စကို ဆွေးနွေး ခဲ့ကြတယ်လို့ ပူးတွဲထုတ်ပြန်ပါတယ်။ တခြား အသေးစိတ် အချက်အလက်တော့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ မပါပါဘူး။
စိမ်းလဲ့ကန်သာမှာ နေ့ခင်းတနာရီက စတင်ပြီး တနာရီနီး ပါးကြာမြင့်တဲ့ ဒီဆွေးနွေးပွဲဟာ ​ ​ပြည်ထောင်စု​ သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ​ အစိုးရ​ အဖွဲ့ရဲ့​​ ​ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လေးကြိမ်မြောက်​ ဖိတ်ကြားချက် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ အရင်ဆွေးနွေးပွဲတွေအပေါ် နိုင်ငံတော်က ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ အခြေအနေ၊ တိုင်းပြည် စီးပွားဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာဖို့ လွတ်လပ်စွာ ကုန်သွယ်ခွင့်၊ ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ခွင့် ရရှိရေးနဲ့ လွတ်လပ်စွာ ငွေကြေး လည်ပတ် သုံးစွဲခွင့် ရရှိရေးတို့၊ အရေးကြီးမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ အမြင်ချင်း ဖလှယ်ခဲ့ ဆွေးနွေး ခဲ့ကြတယ်လို့ ပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်က ဆိုပါတယ်။
Posted by PNSjapan at 10:44 PM0comments
ဒီပဲယင်း နိုင်ငံတော်လုပ်ကြံမှု လ(၁၀၁)ပြည့် ၀မ်းနည်းခြင်းနှင့် အမျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစေ့နိုင်ရေးအတွက် တောင်းဆို ဆန္ဒပြပွဲ(ဂျပန်)
၂၀၁၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမူရေး ကြပ်တည်းနေသော အခြေအနေမှ အမြန်ဆုံးလွှတ်မြောက်ရန်
အတွက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးသည် မဖြစ်မနေ အမြန်ဆုံး လိုအပ်နေပါသည်။ အမျိုးသားခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တို့သည် ဒီပဲယင်း အရေးအခင်း ဖြစ်ရပ်မှန် ဖေါ်ထုတ် ပေးရန်နှင့် နိုင်ငံအတွက် အရေးတကြီး လိုအပ်နေသော တွေ့ဆုံဆွေးနွေး မှု အမြန်ဆုံး ပေါ်ပေါက် စေရေးအတွက် လက်ရှိစစ်အစိုးရကို အစဉ်တစိုက် တောင်းဆို နေခဲ့ပါသည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်(လွတ်မြောက်နယ်မြေ)ဂျပန်ဌာနခွဲနှင့် ဂျပန်ရောက် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အင်အားစု များမှလည်း လစဉ်(၃၀)ရက် နေ့တိုင်းကျင်းပနေကြ မြန်မာသံရုံးရှေ့ တွင် ဒီပဲယင်း နိုင်ငံတော် လုပ်ကြံမှု လ(၁၀၁)ပြည့် ၀မ်းနည်းခြင်းနှင့် အမျိုးသားပြန်လည် ရင်ကြားစေ့ နိုင်ရေးအတွက် တောင်းဆို ဆန္ဒပြ ခဲ့ကြပါသည်။
ဆန္ဒပြပွဲအခမ်းအနားကို နေ့လည် ၃နာရီမှ ၄နာရီအထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။.
သတင်းရင်းမြစ် ။ NLD(LA)JB
Posted by PNSjapan at 9:48 PM0comments
စုပေါင်းဘုံကထိန်နှင့် ပထမအကြိမ် သက်ကြီး ပူဇော်ပွဲ အခမ်းအနားကို တိုကျိုတွင် ကျင်းပပြုလုပ်
သာသနာ့ဥသျှောင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မြန်မာရဟန်းတော်များ အဖွဲ့ချုပ်-ဂျပန်ဌာနခွဲ၏ ဒုတိယ အကြိမ်မြောက် စုပေါင်းဘုံကထိန် ဆက်ကပ် လှုဒန်းသည့် အခမ်းအနားနှင့် ပထမ အကြိမ် သက်ကြီး ပူဇော်ပွဲ အခမ်းအနားကို တိုကျို Takabanobaba အရပ်ရှိ -Totsuka Chiki Center 5F / 6F ၌ ယနေ့ နံနက် ၉း၃၀ နာရီမှ ၁၂း၀၀ နာရီအထိ ကျင်းပပြုလုပ် ခဲ့ကြပါသည်။
သက်ကြီးပူဇော်ပွဲ အခမ်းအနား အစီအစဉ်ကို မြန်မာ့ လူမှုရေးနဲ့ ယဉ်ကျေးမှု အသင်းမှ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပြီး အသက် ၆၅ နှစ်အထက် ကန်တော့ခံမည့် သက်ကြီးရွယ်အိုများအား လက်လှမ်းမှီသလောက် စုံစမ်းရာခဲ့ရာမှာ ၁၃ ဦးရှိကြောင်း သိရှိခဲ့ရပြီ ကန်တော့ခံ သက်ကြီး ၈ ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ "ဆယ်စုနှစ် နှစ်စု ကျော်လာသည်နှင့်အမျှ ဂျပန်မှာ အခြေချ နေထိုင်လာကြသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေလဲ အနေကြာလာပြီဖြစ်သလို သက်ကြီး ရွယ်အိုပိုင်းများလဲ ရှိလာသည့်အပြင် မြန်မာမိသားစု အသိုင်းအ၀ိုင်းမှ မွေးဖွါးလာကြတဲ ကလေး လူငယ်တွေလဲ များစွာ ရှိလာပြီဖြစ်တယ် မြန်မာ့ဓလေ့ ထုံးတမ်းစဉ်လာတွေကို ရိုးရာမပျက်နဲ့ အစဉ်အလာကောင်းများကို မျိုးဆက်လူငယ်တွေကို သိရှိနားလည်စေရန် ကျင်းပရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ပွဲစီစဉ်သူ တာဝန်ခံ ဒေါ်နွဲ့နွဲ့ကျော်မှ ရှင်းလင်း ပြောကြားသွားပါသည်။
ဆက်လက်ပြီး စုပေါင်းဘုံကထိန် သင်ကန်း ကပ်လှုပွဲအစီအစဉ်များ ဆရာတော်ထံ ဆက်ကပ် လှူဒန်းပြီးသည့်နောက် တက်ရောက်လာခဲ့ကြသူများတို့ကို နေလည်စာဖြင့် ဧည့်ခံကျွေးမွေး ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ ။ ကထိန်ဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ ဗီဒီယိုရုပ်သံ - zayyar20283
ပါလီမန်ဆိုင်ရာ မြန်မာ မိတ်ဆွေများ အသင်း (PFOB) ယာယီ ဥက္ကဌ Hon. Jim Jerygennis(ယာဘက်. ဒုတိယ) အား Ottawa ရှိ ပါလီမန်တွင် တွေ့ရစဉ်။ ဝဲမှယာ… တင်မောင်ထူး (ကနေဒါ မြန်မာမိတ်ဆွေများအသင်း)၊ Keltie Cameron (ကနေဒါ အလုပ်သမား သမ္မဂ္ဂ CUPE)၊ မိအိုက်စွန်း ( MYPO) ၊ Jim Jerygennis ၊ အောင်နိုင်စိုး (တိုင်းရင်းသားလူငယ်များဖိုရမ်)
Photo: Tin Maung Htoo face book
အောက်တိုဘာလ 28 ရက် 2011 ခုနှစ်။
ကနေဒါ အစိုးရ အနေဖြင့် မြန်မာပြည်အပေါ် ထားရှိသည့် ၎င်းတို့၏ မူဝါဒ အားပြောင်းလဲ လိမ့်မည်ဟု မယူဆကြောင်း ကနေဒါ နိုင်ငံသို့ နှစ်ပါတ်ကြာ ခရီးစဉ် အဖြစ်ရောက် ရှိနေသည့် မြန်မာ လူငယ်နှစ်ဦးက သုံးသပ်သည်။
လက်ရှိ ချမှတ် ထားသည့် မြန်မာပြည်အပေါ် ပိတ်ဆို့ရေး မူဝါဒအား ပြန်လည် သုံးသပ်ဦးမှာ မဟုတ်ကြောင်း ကနေဒါ အစိုးရ အရာရှိများနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည့် မွန်လူငယ် တိုးတက်ရေးအဖွဲ့ MYPO မှ မိအိုက်စွန်းက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
“အရင်အတိုင်း ဆက်ထား လိမ့်မယ်။ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ လွှတ်ပေးတာ၊ တိုင်းရင်းသား ဒေသတွေမှာ အပစ် ရပ်တာ၊ အစိုးရရယ်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရယ်၊ တိုင်းရင်းသား တွေအကြား စကားပြော မယ်ဆိုရင် တော့ ဆန်ရှင် ကိစ္စကို ပြန်လည် သုံးသပ်ပါလိမ့်မယ်။ ခုအခြေအနေ အတိုင်းဆို ဒီအတိုင်း ဆက်ထား မယ်လို့ ကတိပေး ထားပါ တယ်” ဟု ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ သိသာထင်ရှားတဲ့ ပြောင်လဲမှုတွေ မရှိသေးကြောင်းကို ဂျပန်လွှတ်တော်အမတ် သမဂ္ဂကို သွားရောက်ပြောဆို
မြန်မာနိုင်ငံမှာ သိသာထင်ရှားတဲ့ ပြောင်လဲမှုတွေ မရှိသေးကြောင်းကို မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေး အားပေး ထောက်ခံသည့် ဂျပန် လွှတ်တော်အမတ် သမဂ္ဂကို မြန်မာအရေး လှုပ်ရှား နေသူတွေက ပြီးခဲ့သည့် အောက်တိုဘာလ ၂၆ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းမှာ သွားရောက် တောင်းဆို တင်ပြပြောခဲ့ကြပါတယ် ။
သတင်းရုပ်သံမှတ်တမ်း - DVBBurmese
NLD ခေါင်းဆောင်တချို့ကို နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား များ၏ သားသမီးများအား ပညာရေးထောက်ပံ့ငွေ ပေးအပ်သည့် အခမ်းအနားတွင် တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ - ဧရာဝတီ)
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) ပါတီ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မတင်ခြင်း ကိစ္စကို လာမည့် သီတင်းပတ် အတွင်း ဆုံးဖြတ် နိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း NLD ခေါင်းဆောင်ဦးဝင်းတင်က ပြောသည်။
“ဥပဒေက အတည်ပြုလိုက်ပြီ ဆိုပေမယ့် စီအီးစီ အဖွဲ့တွေ အစည်းအဝေး လုပ်ပြီးမှ အဖြေ ထွက်လာမှာပါ။ NLD မှတ်ပုံတင်ရေး ကိစ္စဟာ အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စဖြစ်လို့ သေချာ ဆွေးနွေး ကြရဦးမှာပါ။ နောက်တပတ်အတွင်း အစည်းအဝေး အပြီးမှာ ဆုံးဖြတ်ချက်တခု ထွက်လာနိုင်ပါမှာ” ဟု ဦးဝင်းတင်က ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
နိုင်ငံရေး ပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်းအား ယမန်နေ့က ကျင်းပခဲ့သော ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးက အတည်ပြုပေးခဲ့သည်။ ထိုဥပဒေသည် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအရ ရေးဆွဲထားခြင်းကို ပြန်လည်ပြင်ဆင် ရေးဆွဲကာ လွှတ်တော် အသီးသီးမှ အတည်ပြု ပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ပြင်ဆင် လိုက်သော အချက်များ၌ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအား ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရမည် ဆိုသည့်အချက် အစား လေးစား လိုက်နာရမည် ဟူ၍ ပြင်ဆင်လိုက်သည်။
၂၀၁၁ အောက်တိုဘာလ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သည့် ကေအိုင်အို ၅၁ နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်ပွဲကို လိုင်ဇာမြို့နှင့် အခြားနေရာ အသီးသီးတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ကေအိုင်အိုဌာနချုပ် လိုင်ဇာမြို့တွင် နံနက် ၁၀ နာရီအချိန်တွင် လေးနေရာခွဲ ကာ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ကေအိုင်အို အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား
ကေအိုင်အို ဥက္ကဌမှ ပြည်သူများနှင့် အမူထမ်းများသို့ ပေးပို့လိုက်သည့် အမှာစကားတွင် နိုင်ငံရေးတွင် မိမိတို့ရသင့် ရထိုက်သည့် အခွင့်အာဏာ ရရှိရေးသည် အရေးကြီးကြောင်း၊ ယင်းကဲ့သို့ အခွင့် အာဏာ ရရှိရန်အတွက် တိုက်ပွဲ ၀င်ရမည်မှာ ကေအိုင်အို အမူထမ်းများ ၏ တာဝန် ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ကေအိုင်အို ပါတီသည် ထိုတာဝန်ကို ဦးလည်မသုန် ကြိုးစား ထမ်းဆောင် သွားရန် လိုအပ်ကြောင်း ထည့်သွင်း ပြောကြားသွားသည်။
ရေကြီးနေတဲ့ ဘန်ကောက်ဒေသကို ဧရာဝတီသတင်းထောက်က သွားရောက်ပြီး မြန်မာပြည်သားတွေနဲ့ တွေ့ဆုံ မေးမြန်းထားပါတယ်
K.I.A နှင့် စစ်အစိုးရ စစ်တပ်တို့အကြား တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွား
ရှေ့တန်း နယ်မြေမှ K.I.A စစ်သည်တော်များ
Photo by-Jade Land
K.I.A တပ်ရင်း (၃) နယ်မြေဖြစ်တဲ့ ကချင်ပြည်နယ် ဂါးရာယာန် လုန်ဇဲပ် ကုန်းနှင့် ဂန်ဒေါင်ယာန်အနီး ရှိ ဆိုင်းမိုင်ကျေးရွာများတွင် K.I.A တပ်ရင်းများနှင့် စစ်အစိုးရ စစ်တပ်တို့အကြား တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
တဆက်တည်းမှာဘဲ K.I.A ဌာနချုပ် လိုင်ဇာအနီး K.I.A တပ်ရင်း (၂၄) နယ်မြေဖြစ်တဲ့ အင်ဒုန်ဒဘန် သို့ ရိက္ခာလာပို့တဲ့ စစ်အစိုးရ စစ်ကြောင်းကို K.I.A တပ်ရင်းများနှင့် ပြည်သူ့စစ် (MHH) တို့ ပူးပေါင်း ပြီး တိုက်ခိုက် ခဲ့ကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ နှစ်ဖက်စလုံးရဲ့ အခြေအနေများကို ဆက်လက်စုံစမ်း ဆဲပါ။
အောက်တိုဘာလ ၂၇ ရက် ကချင်ပြည်နယ် ဂလာန်ဂျာပါ မှာ K.I.A တပ်မဟာ (၅) လက်အောက်ခံ တပ်ရင်းများနှင့် စစ်အစိုးရ စစ်တပ်တို့အကြား (၃) ရက်မြောက်သော တိုက်ပွဲကို ဆက်လက် ဆင်နွဲနေကြောင်း စုံစမ်း သိရှိရပါတယ်။
K.I.A တပ်ရင်းများနှင့် စစ်အစိုးရ စစ်တပ်တို့အကြား ဗန်းမော် လော်ဒန်ကရုန် မှာ ဖြင်ပွားခဲ့တဲ့ တိုက်ပွဲတွင် စစ်အစိုးရ စစ်တပ် ခမရ (၆၀၁) ရဲ့ တပ်ရင်းမှူး အပါအဝင် ဒု တပ်ရင်းမှူး၊ တပ်ကြပ်ကြီး နှင့် စစ်သားများ (၃၀) ကျော် ထိခိုက် ခဲ့ကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။
တရုတ်ပြည်မှ ကချင်များ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များကို ကူညီ
ကချင်ပြည်နယ် K.I.A ဌာနချုပ် လိုင်ဇာ အနီးရှိ ဂျေယာန်ခ စစ်ပြေးဒုက္ခသည် စခန်းကြီးကို တရုတ်နိုင်ငံ ယင်ဂျန်းမြို့မှ ကချင်ပြည်သူပြည်သားများက ကချင် စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များကို လာရောက် ကြည့်ရှုအားပေး သွားပြီး ဆန် (၂၀၀) အိတ်ကိုလည်း လာရောက် ကူညီ ပေးအပ်သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ကြောင်း စုံစမ်း သိရှိရပါတယ်။
နေပြည်တော်အစိုးရအား သျှမ်းတပ်နှစ်ဖွဲ့ ပူးပေါင်းဆွေးနွေးရန် ဆန္ဒရှိ .
RCSS ပြောခွင့်ရ ဗိုလ်မှူးလောဝ်ဆိုင်
အောက်တိုဘာလ 27 ရက် 2011 ခုနှစ်။
နေပြည်တော်အစိုးရ ကမ်းလှမ်းထားသည့်အတိုင်း ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စအမှန် တကယ်ဆွေးနွေးဖြစ်ပါက သျှမ်းပြည် တပ် မတော် တောင်ပိုင်း/မြောက်ပိုင်း ဟုလူသိများသည့် RCSS/SSA နှင့် SSPP/SSA ပူးပေါင်းဆွေးနွေးရန်ဆန္ဒရှိ ကြောင်း RCSS ပြောခွင့် ရ ဗိုလ်မှူးလောဝ်ဆိုင်က ပြောပါသည်။
“ကျနော်တို့ ခေါင်းဆောင်ကြီး စဝ်ယွက်စစ်ပြောပြောနေတဲ့ နိုင်ငံရေးပြသနာကို ငြိမ်းချမ်းစွာ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပြီးမှ ဖြေ ရှင်းလိုတယ်ဆိုတဲ့ မူဝါဒနဲ့တိုက်ဆိုင်စွာ သမတကြီးဦးသိန်းစိန် ကလည်း ဆွေးနွေးဖို့ ကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့ဆီကို နမ့်ဇန်၊ ဟိုမိန်းက ပြည်သူ့စစ်တွေနဲ့ ကမ်းလှမ်းခိုင်းတယ်။ ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေနဲ့လဲကမ်းလှမ်း ပြော ဆိုခိုင်း ခဲ့ပါတယ်” - ဟု ပြောပါသည်။
မြန်မာအစိုးရသစ်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရန် ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က သျှမ်းပြည်တပ်မတော်တောင်ပိုင်း တပ်ဖွဲ့က သျှမ်း ပြည်အစိုးရ နှင့် နေပြည်တော်အစိုးရထံ ပြန်စာပို့ထားသည်။ ထို့အတူ သျှမ်းပြည်တပ်မ တော် မြောက်ပိုင်း တပ်ဖွဲ့နှင့် လည်း မကြာခင်ကာလ၌ ဆွေးနွေးတော့မည်ဟုလည်းသျှမ်းတပ်မှူးအသိုင်း အဝိုင်းက ပြောပါသည်။
အလစ် ၀င်ရောက် ပစ်ခတ်မှုကြောင့် အစိုးရတပ်ဖွဲ့ဝင် ၃ဦး ကျဆုံး
မြ၀တီမြို့တောင်ပိုင်းရှိ ဝေါ်လေဒေသ ဘုရင့်နောင်ကုန်းတွင် အခြေချ လှုပ်ရှားသည့် အစိုးရ စစ်တပ်အား ကရင်အမျိုးသားလွတ် မြောက်ရေး တပ်မတော်(KNLA)တို့က ယနေ့နံနက်တွင် သွားရောက် ပစ်ခတ်ခဲ့ရာ ၃ဦး သေဆုံးခဲ့သည်ဟု KNLA ဘက်က ပြော သည်။
KNLA (၂၀၁) တပ်မှူး တစ်ဦးက “ဒီမနက် ၇နာရီကျော် ဘုရင့်နောင်ကုန်း စခန်းမှာရှိတဲ့ ခမရ(၃၇၂) စစ်ကြောင်း(၁)ကို ကျနော် တို့ ကေအဲန်အယ်လ်အေ တပ်ရင်း(၂၀၁) တပ်ဖွဲ့ဝင် တချို့က သွားချောင်း ပစ်တော့ ၃ယောက် သေတယ်။”ဟု ပြောသည်။
၎င်းတိုက်ခိုက်မှု အပြီးတွင် အစိုးရတပ်ဘက်မှ KNLA တပ်များကို လက်နက်ကြီး၊ လက်နက်ငယ်များဖြင့် ၆မိနစ်ခန့် လိုက်လံပစ် ခတ်ခဲ့သည်။ သို့သော် ကေအဲန်အယ်လ်အေဘက်က ထိခိုက်မှု မရှိကြောင်း အဆိုပါ တပ်မှူးက ပြောသည်။
“ဒီမနက် ၇နာရီကျော်လောက်ပေါ့နော်။ မောခီးဘက်မှာ လက်နက်ကြီးသံ ၂ချက် ကြားလိုက်တယ်။ တအောင့် လောက်ကြာ တော့ နောက်တစ်လုံး ထပ်ကြားတယ်။”ဟု ဝေါ်လေရွာသား တစ်ဦးက ပြောသည်။
မြ၀တီမြို့တောင်ဘက် ၅၀ကီလိုမီတာခန့် ကွာဝေးသည့် ဝေါ်လေဒေသတွင် အခြေချ လှုပ်ရှားနေသည့် အစိုးရ စစ်တပ်များနှင့် ကော့ကရိတ်မြို့နယ်တွင် လှုပ်ရှားနေသည့် အစိုးရတပ်များမှာ ကရင်တပ်ဖွဲ့တို့၏ မကြာခဏ ပစ်ခတ်မှုများကြောင့် ထိခိုက်ကျ ဆုံးမှု များပြားလျှက်ရှိသည်။
27 October 2011 ,
အောက်တိုဘာ ၂၆ ယမန်နေ့ ကချင်ပြည်နယ် မြောက်ဘက် မြစ်ကြီးနား-ဆွမ်ပရာဘွမ် လမ်းပေါ်ရှိ မြန်မာအစိုးရ စစ်စခန်း တစ်ခုအား KIA မှ တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ အစိုးရ စစ်သား ၉ ဦး ကျပြီး စစ်စခန်း ကိုလည်း သ်ိမ်းပိုက်လိုက် ကြောင်း ဒေသခံများပြောသည်။
ကျဆုံးသူများတွင် စခန်းမှူး ဗိုလ်ကြီးဇော်ဇော် ပါပြီး တပ်ကြပ်ကြီး တစ်ဦးသာ ထွက်ပြေး လွတ်မြောက် သွားသည် ဟု ဒေသခံများ ဆက်ဆိုသည်။
KIA ဘက်မှ စစ်သား တစ်ဦး ကျဆုံးသည်ဟု အထက်အရာရှိများ ကချင်သတင်းဌာနသို့ အတည်ပြုသည်။
ဆွမ်ပရာဘွမ်မြို့ အနီး ဒရူခ (Daru Hka) ချောင်းတံတားတွင် တံတား လုံခြုံရေး ယူထားသော မုန်လန်ရှီဒီး (ပူတာအို) နယ်မြေခံ ခလရ အမှတ် (၁၃၈) တပ်ဖွဲ့ နှင့် KIA တပ်မဟာ (၁) တပ်ဖွဲ့များကြား တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားခြင်း ဖြစ်သည်ဟု KIA အရာရှိများ ဆိုသည်။
နံနက် ၇ နာရီမှ တစ်နာရီကြာ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား ပြီးနောက် ယင်းစခန်းကို KIA မှ သိမ်းပိုက် လိုက်သည်ဟု KIA ကဆိုသည်။
ကျသွားသော မြန်မာစစ်စခန်းမှ သေနတ် ၃ လက်၊ ကျည်ဆံ ၁၁၂၁ တောင့်၊ ဆက်သွယ်ရေး စကားပြောစက်ကြီး (WT) ၁ လုံးနှင့် စကားပြော စက်သေး (RT) ၂ လုံး တို့ကို သိမ်းစည်း ရကြောင်း KIA က ဆက်ဆိုသည်။
ဒုတိယ ပင်လုံ ညီလာခံဟာ ပြည်ထောင်စုရဲ့လိုအပ်ချက် ဖြစ်တယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြော
မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်မှ လွတ်မြောက်လာပြီးနောက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဌာနချုပ်ရုံးတွင် ပြည်သူများအား မိန့်ခွန်းပြောကြားစဉ်။ (Photo: AFP)
“ဒုတိယ ပင်လုံဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပြည်ထောင်စု လိုအပ်ချက် တစ်ခုလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် တခြား ဘယ်လို ကိစ္စတွေပဲ ရှိနေရှိနေ ဒီလိုအပ်ချက်ကို လက်လွှတ်စရာ မရှိပါဘူး။ လက်တွေ့ကျကျ လုပ်ပုံ လုပ်နည်းတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ စဉ်းစားစရာတွေက အတော်များ တာကြောင့်မို့လို့ နှောင့်နှေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်”
ပြီးခဲ့တဲ့၂၀၁၀ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်နေ့က စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ကလေးမြို့မှာ ကျင်းပတဲ့ ဇိုမီး အမျိုးသား ကွန်ဂရက် ၂၂ နှစ် မြောက် အခမ်းအနားမှာ ဒုတိယအကြိမ် ပင်လုံညီလာခံ ခေါ်ယူရေး ကြိုးပမ်းဖို့ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ နိုင်ငံရေး အင်အားစု ခေါင်းဆောင်တွေ အပါအဝင် ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားသူတွေ သဘောတူ လက်မှတ် ရေးထိုး ခဲ့ကြပြီး ကလေးမြို့ ကြေညာ စာတမ်းကို ထုတ်ပြန် ခဲ့တာပါ။
ရခိုင်လူမျိုးများ ဗြိတိသျှ သံရုံးရှေ့ ဆန္ဒပြရန် လှုံ့ဆော်
လန်ဒန်မြို့ဗြိတိသျှ အသံလွှင့်ဌာန (BBC)မှာ သတင်းထောက် တစ်ဦးဖြစ်သူ Anna Jones သတင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ရန်ကုန်မြို့ရှိ ရခိုင်လူမျိုးများက မကျေမနပ် ဖြစ်ကာ ဘီဘီစီ သတင်းဌာနကို သပိတ်မှောက် သောအားဖြင့် ရန်ကုန်မြို့ကမ်းနားလမ်းရှိ ဗြိတိသျှ သံရုံးရှေ့တွင် ဆန္ဒပြရန် စီစဉ်ထားသည်ဟု FNG မှ သတင်း ရရှိသည်။
အဆိုပါ သတင်းဖော်ပြချက်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ရခိုင်လူမျိုးများ သာမက မြန်မာနှင့် အခြား တိုင်းရင်း သားများ ပါ မကျေမနပ် ဖြစ်ဖွယ် ရှိကြောင်း ရန်ကုန်မြို့ မှ အပတ်စဉ်ထုတ် သတင်း ဂျာနယ် အယ်ဒီတာ တစ်ဦးက သုံးသပ် ပြောသည်။
အဆိုပါ သတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည့် မြန်မာနိုင်ငံ မြေပုံဉ် ရခိုင်ပြည်နယ် မြေပုံကို ရိုဟင်ဂျာပိုင် နယ် ( Rohinja Territory) ဟု ဖော်ပြထား ရှိသည်။
ဘီဘီစီ မြန်မာပိုင်းဌာနမှ လူတွေ ဒီဆောင်ပါးနှင့်ဓါတ်ပုံကို မတွေ့ ကြဘူးလား..၊
ဘီဘီစီ (BBC) နှင့် သတင်းထောက် Anna Jones တို့ဟာ တာဝန်မဲ့စွာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူမျိုး စာရင်းကို တလွဲ ပြုစုခဲ့ပါတယ်... ဒါတွေဟာ သမိုင်းကျောင်းကို ဇောက်ထိုး မိုးမျှော် ဖြစ်စေတဲ့အတွက် လုံးဝကို ကန့်ကွက်ပါတယ်...... အားလုံးသော အမျိုးချစ်သူများလည်း http://www.facebook.com/bbcburmese မှာ သွားရောက် ကန့်ကွက် ပေးကြပါလို့ တောင်းဆိုလိုပါတယ်....
Anna Jones ရဲ့ မူရင်း ဆောင်းပါးကိုတော့ ဒီ http://www.bbc.co.uk/news/world...-asia-pacific-11595983 မှာ ဖတ်ရှု နိုင်ပါတယ်...။
BBC BURMESE ကိုကန်.ကွက် လိုသူများခင်ဗျာ BBC ပိုင်ရှင်များသည် wall ပေါ်တွင်ရေးထား သော စားများကို ဘယ်တော့ မှပြန်မဖတ်သည့်အတွက် အီမေလ်းလိပ်စာ helenboaden.complaints@bbc.co.uk
သို.ဆက်သွယ်ပြီး English လို့ကန်.ကွက်စာ ရေးသားပေရန်။
Copy from - lanpyakye.com/
၁၃၇၃ခုနှစ် ၊ သီတင်းကျွတ်လကွယ်နေ့ 
(၂၀၁၁ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၆ရက်)
လျှော့ရက်ခံစားခွင့်မရှိသော သီးသန့် ၊ သာမန်သီးသန့် အကျဉ်းသားများအား လျှော့ရက်ခံစားခွင့်ပေးရေး
လက်ရှိအခြေအနေမှာ မြန်မာပြည်တွင်းမှာ နိုင်ငံရေး အခြေအနေတွေ လှုပ်လှုပ် ရှားရှား ဖြစ်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁ဝ ခုနှစ် မတ်လ ၈ ရက်နေ့က စစ်အစိုးရက သူတို့ရဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းစဉ်တုန်းက တင်းတင်းမာမာ ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ ကန့်သတ်ချက်တွေကို ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်ပြီးတော့ အင်န်အယ်ဒီပါတီကို မှတ်ပုံတင်နိုင်အောင် လုပ်ပေး နေပြီလို့ သတင်းတွေ ကြားနေရတယ်။ ဒါကြောင့် ဆရာဦးဝင်းတင်နဲ့ သူ့သဘောထားကို မေးမြန်း ခဲ့ပါတယ်။
မေး။ ။၂၀၁၀ မတ်လ ၈ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ စစ်အစိုးရရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေ အကြောင်းလေး ပြန်ပြော ရအောင် ဆရာ။
ဖြေ။ ။ အဲသည်တုန်းက အင်န်အယ်ဒီပါတီက အဲသည်က အချက်အလက် တွေကို လက်မခံ နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ဖို့ ပါတီကို မှတ်ပုံ မတင်ခဲ့ဘူး။ ၂၀၁၀ တုန်းက ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အနေအထားမှာ ၂၀၀၈ အခြေခံ ဥပဒေကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ပါမည်လို့ သစ္စာခံ ခိုင်းတာပါတယ်။ ဒါကို တို့က ငြင်းခဲ့တယ်။ ထောင်ထဲ ရောက်နေတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေကို ပါတီကနေ ထုတ်ပစ် ရမယ်လို့ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေမှာ ဆိုထားခဲ့တယ်၊ အဲသည်တုန်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ ရှိနေတယ်။ ဒါကို လက်မခံ နိုင်ဘူး။ နောက်ပြီးတော့ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲရ လဒ်တွေကို ပျက်ပြယ်ပြီလို့ မှတ်ယူ ရမယ်ဆိုတဲ့ စာပိုဒ်ပါတယ်။ ဒါကိုလည်း ဒို့က လက်မခံခဲ့ဘူး။
ဖြေ။ ။ ဟုတ်ပါတယ်။ အဲသည်တုန်းက အကြောင်းတွေကို ကျနော့် မီဒီယာ အင်တာဗျူးတွေမှာ ပြောခဲ့ တာတွေ ရှိတယ်။ ခင်ဗျားတို့ဆီမှာ ရှိသေးရင်လည်း ပြန်ညွှန်းပြစေချင်တယ်။ အသေးစိတ်ကို အဲသည်မှာ ကြည့်လို့ ရတယ်လေ။
မြန်မာစစ်သား ပစ်ခတ်မှု တွင် ကိုယ်ဝန်နှင့်ကျောင်း ဆရာမ ဒဏ်ရာရ
အောက်တိုဘာလ 25 ရက် 2011 ခုနှစ် ။
ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေသော ကချင်ပြည်နယ်တွင် မြန်မာ အစိုးရစစ်သားတစ်ဦး ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင် ကျောင်းဆရာမသဲသဲ ထိခိုက် ဒဏ်ရာ ရကာ ဗန်းမော်ဆေးရုံ ရောက်နေကြောင်း ဆရာမနှင့်နီးစပ်သူများပြောသည်။
ဆရာမသည် အသက် (၃၅) နှစ်ရှိပြီး ကိုယ်ဝန် (၅) လနှင့် မန်မော် (ဗန်းမော်) ခရိုင် အင်မောက် (မိုးမောက်) အစိုးရ အထက်တန်းကျောင်းမှ အလယ်တန်းပြ ဖြစ်သည်။
အောက်တိုဘာ ၂၃ တနင်္ဂနွေနေ့ အိမ်ပြန်လမ်း အင်မောက်အနီး ကွက် (၁) တွင် ဆရာမကို စစ်သားများ ရပ်ခိုင်းသည်။ ထိုချိန် လမ်းဘေး အိမ်တစ်အိမ်မှ ထွက်လာသော စစ်သားတစ်ဦးက ဆရာမ ရပ်နေသည့် နေရာသို့ သေနတ် ပစ်ခတ်လိုက်သည်။
သေနတ်ကျည်ဆံသည် ကျောက်ခင်းလမ်းပေါ် ထိပြီး လမ်းပေါ်မှ ပြန်ထွက်လာသော ကျည်စ သို့မဟုတ် ကျောက်စ (၅) ခုသည် ဆရာမကို ထိမှန်ကာ ဒဏ်ရာရရှိစေခဲ့သည်ဟု မျက်မြင်သက်သေများပြောသည်။
ကျည်စ သို့မဟုတ် ကျောက်စ တစ်ခုသည် ဆရာမ၏ လည်ပင်းထဲစိုက်ဝင်သွားပြီး ခွဲထုတ်ရန်ခက်ခဲကြောင်း နှင့် ၀မ်းဗိုက်တွင်ထိမှန်သော ကျောက်စ သို့မဟုတ် ကျည်စ (၄) ခုမှ ၁ ခုသည် ဒဏ်ရာပြင်းထန်ကြောင်း သိရသည်။
စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှု ရုပ်သိမ်းရန် စောသေးကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြော
အောက်တိုဘာ ၂၂ ရက်နေ့က NLD အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင်များ၏ ရိုးရာ အထည်လုပ်ငန်းသို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သွားရောက်လေ့လာစဉ်
အမေရိကန်နိုင်ငံ အပါအဝင် အနောက်နိုင်ငံများ၏ ဒဏ်ခတ် ပိတ်ဆို့မှုများ မရုပ်သိမ်းမီ မြန်မာအစိုးရ အနေဖြင့် အပြောင်းအလဲ များစွာ လုပ်ရန်လိုသေးကြောင်း မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က The Wall Street Journal သတင်းစာနှင့် တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခန်းတွင် ပြောဆို လိုက်သည်။
ယနေ့ထုတ် အဆိုပါ သတင်းစာတွင် ပါရှိသည့် တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခန်းတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သတင်းထောက် ဆီလင်း ဖာနန်ဒတ်ဇ်အား မြန်မာပြည်အပေါ် စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှုများ ရုပ်သိမ်းရန် စောသေးသည်ဟု ပြောရသည့် အချက်နှစ်ချက် ရှိကြောင်း ပြောသည်။
ပထမ တချက်မှာ မြန်မာအစိုးရ အနေဖြင့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများအား ခြွင်းချက်မရှိ လွှတ်ပေးရန်ဖြစ်ပြီး ဒုတိယအချက်မှာ တိုင်းရင်းသား ဒေသများတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသည့် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများ၊ စစ်ပွဲများနှင့် ပတ်သက်သည့် ပြဿနာများကို ရှင်းလင်းပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ ထိုနှစ်ချက်ကို မဖြေရှင်း နိုင်သေးသရွေ့ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှု ရုပ်သိမ်းရန် အချိန်မကျ သေးကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆယ်စုနှစ်တွေနဲ့ချီ မတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အပြုသဘော ဆောင်တဲ့ အပြောင်းအလဲ တချို့ တွေ့နေရတာကို ငြင်းချက် ထုတ်စရာ မရှိပေမဲ့ ဒီဖြစ်ထွန်းမှု အများစုဟာ ယာယီအဆင့်မှာပဲ ရှိနေသေးတာကြောင့် အနှစ်သာရရှိတဲ့ အပြောင်း အလဲတွေ ရှိနေပြီလို့ ပြောဖို့ အချိန်မတန် သေး​ကြောင်း အရှေ့အာရှနဲ့ ပစိဖိတ် ဒေသရေးရာ အမေရိကန် လက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး Kurt Campbell က ဒီကနေ့မှာပဲ ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အမေရိကန်က အစဉ်တစိုက် ပြောလာခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ အားလုံးကို ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ ကိုလည်း သူက ထပ်ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကို ဘန်ကောက်ကနေ ဒေါ်ခင်စိုးဝင်းက သတင်း ပေးပို့ထားပါတယ်။
အမေရိကန် လက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး Kurt Campbellက မြန်မာအစိုးရက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးတာ၊ အလုပ်သမား ဥပဒေ အတည်ပြုခဲ့တာ၊ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား တချို့လွှတ်ပေးခဲ့တာ၊ ဧရာဝတီမြစ်ဖျားခံရာ မြစ်ဆုံရေကာတာ စီမံကိန်း ဆိုင်းငံ့ ခဲ့တာ အပါအဝင် ဖြစ်ထွန်းမှုတွေ တွေ့ရလို့ အားတက် မိတယ်လို့ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ ဂျာကာတာမြို့မှာ ကျင်းပတဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ အခုလိုပြောဆို လိုက်ပါတယ်။
လွှတ်တော်တွေထဲမှာ အချေအတင် ဆွေးနွေးတာတွေ စတင်နိုင်ခဲ့တယ် ဆိုတာကလည်း ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးကို ရှေ့ရှုတဲ့ ခြေလှမ်း ဖြစ်ပြီးတော့ နိုင်ငံအတွင်း ဒီထက်မက အပြုသဘော ဆောင်တဲ့ အလားအလာတွေ မျှော်မှန်းလို့ ရပြီဆိုတဲ့ သဘောပါပဲလို့ ဆိုပါတယ်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရရင် ဆယ်စုနှစ်တွေနဲ့ချီ မတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အပြုသဘော အဆောင်ဆုံး ဖြစ်ထွန်းမှု တချို့ကို တွေ့နေရတယ် ဆိုတာကတော့ ငြင်းစရာ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီဖြစ်ထွန်းမှု အများစုဟာ ယာယီ အဆင့်မှာပဲ ရှိနေသေး တာကြောင့် အနှစ်သာရရှိတဲ့ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်လာပြီလို့တော့ ပြောဖို့ စောသေးတယ်၊ အချိန်မတန် သေးဘူးလို့ ပြောဆို သွားတာဖြစ်ပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်မြောက်ရေးေ က်ာမရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ပြည်တော်ပြန်ခြင်း – Saya Gyi Han visits native place
အောက်တိုဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၁
photo: Moe Kyaw Lwin/The VOICE
၂၀၁၁ ရွေးကောက်ပွဲမျက်နှာပန်းလှရေး ပြည်ပတွင် အထူး ၀ါယမစိုက်ခဲ့သူ ဦးဟန်ယောင်ဝေက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့မည်ဟု Messenger ဂျာနယ် အင်တာနက်စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသည်
ဒီကနေ့ ဖေါ်ဝပ်မေးလ်နဲ့ ရောက်လာတဲ့ စာတစောင် က စိတ်ဝင်စားစရာမို့ မျှဝေချင်တဲ့စိတ် အခြေခံနဲ့ ဒီစာစုကို ရေးပါတယ်။
NCUB – ဥရောပ ကိုယ်စားလှယ် ဦးနွယ်အောင် က သူတက်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ Towards Peace and Democracy in Burma, European Parliament, Brussels, 05 October 2010 ကွန်ဖရင့်မှာ အခု ရန်ကုန် ရောက်နေတဲ့ Euro-Burma-Office (EBO)က ဦးဟန်ယောင်ဝေ ပြောခဲ့တာတွေ ကဟောသလို ပါဆိုပြီး ဥရောပ ပါလီမန်အဖွဲ့ဆီ လှမ်းရေးထားတဲ့ စာခင်ဗျ။ အကျဉ်းချုပ်ပြောရရင် ဦးဟန်ယောင်ဝေက
1) EU sanctions on Burma do not bring any solution to Burma in last 20 years, so that EU Policy on Burma should be reviewed
အီးယူ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေ နှစ် ၂၀ သာကြာရော ဘာမှဖြစ်မလာတာမို့ ပြန်သုံးသပ်သင့်ကြောင်း။
2) The European Parliament should engage with the new government in Burma in light of the 2010 elections
အီးယူ ပါလီမန် အနေနဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်တွေနဲ့တက်လာတဲ့ မြန်မာအစိုးရသစ်နဲ့ လက်တွဲ သင့်ကြောင်း
3) The election laws of the 2010 elections are exactly the same of that of the 1990 elections, so why the 2010 elections should be boycotted since the 1990 elections had not been boycotted
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေ တွေဟာ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေနဲ့ တသွေမတိမ်း တူပါလျက် ၊ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ ကိုတော့ လက်ခံခဲ့ပြီး ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကိုတော့ ဘာကြောင့် သပိတ်မှောက် ရမှာပါလဲ။
4) Boycotting 2010 elections by the NLD isa‘ strategic mistake ‘ of the NLD
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်ခဲ့တာ ကတော့ NLD ရဲ့ တလွဲဗျူဟာ သာဖြစ်ကြောင်း။
5) Re establishment of UN Commission of Inquiry to investigate crimes in Burma, Harn Yawnghwe suggested that General Tin Oo (former Chief-of-Defense at Ne Win’s era, at present Vice-Chairman U Tin Oo of the NLD in Burma) should be the first person to be investigated due to his ‘ 4-cut strategy’ towards ethnic minorities in the 1960s
ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ကုလစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ကော်မရှင်အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စုံစမ်း စစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်တော့မယ် ဆိုရင်.. ဦးနေ၀င်းခေတ်မှာ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် လုပ်ခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ချုပ် ကြီးတင်ဦး၊ လက်ရှိ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဒု-ဥက္ကဌ ဦးတင်ဦး အနေနဲ့ သူ့လက်ထက်၊ ၁၉၆၀ ခုနှစ် များဆီက တိုင်းရင်းသားတွေကို ဖြတ်လေးဖြတ်နဲ့ နှိပ်ကွပ်ခဲ့တာကို အရင်ဆုံး စစ်ဆေးသင့်ကြောင်း ဦးဟန်ယောင်ဝေက တင်ပြခဲ့ပါကြောင်း။
ကိုင်း အချုပ်ကတော့ အဲဒါပါဘဲခင်ဗျား။ အတော်တော့ ဟုတ်နေပါပြီ။ ဦးတင်ဦးကို ဖြတ်လေးဖြတ် ဆိုရင်.. ဦးသန်းရွှေတို့ ..သီဟသူရတင်အောင်မြင့်ဦးတို့ အပါအ၀င် လက်ရှိ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေ ဘာတွေ ကျူးလွန် ခဲ့ကြသလဲ ဆိုတာတွေ စုံစမ်း စစ်ဆေးရာမှာ ချန်ခဲ့လို့ဖြစ်ပါ့မလား..။ ဦးဟန်ယောင်ဝေ ခမြာ..ဒါကိုတော့ ထည့် မပြောဝံ့ရှာဘူးလေ.. ။
ဘယ်ဖြစ်မတုန်း.. ရွေးကောက်ပွဲကို ထောက်ခံခဲ့သူကြီး တယောက်အဖို့ ဦးသန်းရွှေနဲ့ အပေါင်းပါများကို သွား ရန်လုပ်လို့ဘယ်ဖြစ်မလဲလေ ။ တလှေထဲစီး သူများပေဘဲ။
NDF ပါတီကို ရွေးကောက်ပွဲရန်ပုံငွေထုတ်ပေးခဲ့သူ ကလဲ ဦးဟန်ယောင်ဝေ ဖြစ်ပါကြောင်း တဲ့ခင်ဗျ ဟိုက သည်က ကြားလာတာလေးကလေ။
အံ့သြော သွားသလားခင်ဗျ.. ကျန်နေပါသေး.. သူလာမယ်ဆိုတာ ကို The Voice ဂျာနယ်က အရင် သိသဗျား။ မဆန်းပါဘူး အဲဒီ ဂျာနယ် ပိုင်ရှင် က ရွေးကောက်ပွဲ ဂုရုကြီး အလုပ်ကောင်းလို့ တပြည်လုံး နီးပါး ချဉ်ဖတ်အဖြစ် ကြီးဖြစ်သွားခဲ့ရတဲ့ ဒေါက်တာ နေ၀င်းမောင် ဖြစ်သကိုး။
ခုလောက်ဆိုရင် ဘယ်ယုန်မြင်လို့ ဘယ်ချုံထွင်ဖို့ ဆြာကြီး ဟန်ယောင်ဝေ ရောက်လာတယ်ဆိုတာ ရိပ်စား မိနိုင်လောက်ရဲ့..။
သူကဘဲ ဒေါ်စုနဲ့ တွေ့ခွင့် တောင်းသတဲ့။ ဟိုက သဘောကောင်း၊ သူ့အဖေအတိုင်း ရန်သူကိုတောင် တိုင်းပြည် ကောင်းဖို့ဆို အပစ်အနာ ဖယ်ထားပြီး လက်ဆွဲ နှုတ်ဆက်ရဲတဲ့ အာဂ နိုင်ငံ့သမီးကောင်း။
ပွဲကြီးပွဲကောင်း တော့ ကြည့်ကြသေးတာပေါ့ဗျား……။
စာကို ကလစ်ပြီး ဖတ်နိုင်သလို တချို့ အရေးပါတဲ့ အချက်တွေကိုတော့ တတ်သလောက် ဘာသာပြန်ပြီး ရေးလိုက်တယ်။
သာယာဝတီ ထောင်ပိုင်ကြီးနဲ့တွေ့ ပြီး ပါဆယ်၊ ပိုက်ဆံ နဲ့ ဂျာနယ်တွေ အပ်တာပါ..။ အရမ်အဆင်ပြေပြီး အရမ်းဖော်ရွေလို့အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်..။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား (၃၄) ယောက်အတွက် ပိုက်ဆံ ၃သိန်း ၄သောင်း နှင့် ဂျာနယ် (၈၁) စောင်၊ အထွေထွေ စာအုပ် (၃၄) အုပ်လှူခဲ့ပါတယ်..။ သာဓုခေါ်ကြပါခင်မျာ..။
Copy from- irrawaddyblog.com
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ရာစုနှစ်အထိမ်းအမှတ် စကားပြောခြင်း (ရုပ်သံ)
(1) ON DEMOCRACY AND NON-VIOLENCE
(2) ON BUDDHISM
(3) ABOUT CHINA AND HONGKONG
(4) ON BURMA'S SITUATION
(Min Kyaw Khine's facebook မှ ...)
တနင်္လာ, 24 အောက်တိုဘာ 2011
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု မစ်ရှီဂန်တက္ကသိုလ် (University of Michigan) ရဲ့ ရာအိုး ဝေါ်လင်ဘတ် (Raoul Wallenberg) ဆုကို ချီးမြှင့် လိုက်ပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ နည်းနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ရရှိစေဖို့ အနစ်နာခံ ကြိုးပမ်းမှု တွေအတွက် အခုလို ချီးမြှင့် တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂါနေ့ည အမေရိကန် စံတော်ချိန် ၇ နာရီခွဲမှာ မစ်ရှီဂန် တက္ကသိုလ်က ကျောင်းသား တွေနဲ့လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဗွီဒီယို ရုပ်သံနဲ့ တိုက်ရိုက် ဆွေးနွေးဖို့ရှိပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ဒေါ်ခင်မျိုးသက်က တင်ပြထားပါတယ်။
အမေရိကန် အရှေ့မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ မစ်ရှီဂန် တက္ကသိုလ်မှာ “လူမှုအသိုက် အ၀န်းထဲက တကယ့် အပြောင်းအလဲကို ဖေါ်ဆောင်နိုင်တဲ့လူသား” အတွက် ရည်ရွယ်တဲ့ ဝေါ်လင်ဘတ်ဆုကို ဒီနှစ်အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ချီးမြှင့်လိုက်ပါတယ်။ မစ်ရှီဂန် တက္ကသိုလ်က လက်ထောက်အကြီးအကဲ ဒေါက်တာ ဂျွန် ဂေါ့ဒ်ဖရီး (John Godfrey) က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ လွတ်လပ်မှုအတွက် မဆုတ်မနစ် ကြိုးစားသူတစ်ဦးဖြစ်သလို တကမ္ဘာလုံးကိုလည်း သူ့ရဲ့ အတွေးအခေါ်နဲ့ လွှမ်းမိုးစေခဲ့သူမို့ ဒီဆုကို ချီးမြှင့်ခဲ့တာလို့ ပြောပါတယ်။
ထိုင်းက တိုင်းပြည် ပျက်သလောက် ဖြစ်နေပြီ ။ လယ်တွေပျက်တယ်။ စက်မှုဇုံတွေ ရေမြုပ် ကုန်ပါတယ်။ အနုမြုဗုံးတလုံး ကျသလိုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တနင်္လာ, 24 အောက်တိုဘာ 2001
ရှမ်းပြည်နယ် ကွတ်ခိုင်ဒေသမှာ ဒေသခံအမျိုးသမီး ၉ ဦး အစော်ကားခံရပြီး သေဆုံးနေတာ တွေ့ရတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။ အခုလို ပြဿနာတွေဟာ မြန်မာစစ်တပ် တပ်ချထားတဲ့ နေရာဒေသတ၀ိုက် ဖြစ်ပွားနေခြင်း ဖြစ်တယ်လို့လည်း ကချင်အမျိုးသမီးအဖွဲ့က ဆိုပါတယ်။ စစ်တပ်အနေနဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို အလုပ်သမား ပေါ်တာအဖြစ် ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင်သွားပြီးနောက် ခုလိုသတ်ဖြတ် ခဲ့ခြင်းလည်း ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အပြည့်အစုံကိုတော့ ထိုင်းအခြေစိုက် သတင်းထောက် နူးပန်က တင်ပြထားပါတယ်။
မြန်မာ အစိုးရ စစ်တပ်နဲ့ ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KIA တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ ကချင်ပြည်နယ် တွေမှာ လတ်တလောမှာပဲ အမျိုးသမီးတွေကို ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်ခြင်းတွေ ပိုမိုများပြား လာပြီး မကြာခဏ ဆိုသလို ဖြစ်နေတာပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းကတော့ KIO တပ်မဟာ (၄) အခြေစိုက်ထားတဲ့ ရှမ်းပြည်နယ် ဘက်မှာ အမျိုးသမီးတွေ တပြိုင်နက် စစ်တပ်များရဲ့ အဓမ္မပြုကျင့် သတ်ဖြတ် ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ ကွတ်ခိုင် ဒေသခံက အခုလို ပြောပါတယ်။
“ကွတ်ခိုင် ဗျူဟာမှူး လက်အောက် စစ်တပ် (၄၅), (၆၇), (၆၈), (၁၄၁), (၁၄၂) တပ်တို့က ၂၁ ရက်နေ့မှာ ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း ကွတ်ခိုင် ဧရိယာမှာ ရှောင်းဟော်ရွာမှာပါ။ အဲဒီမှာ အမျိုးသမီး ၉ ဦးကို ပေါ်တာ ခေါ်ဆောင်သွားတာပေါ့။ ပေါ်တာ ခေါ်သွားပြီးမှ အဲဒီအမျိုးသမီး ၉ ဦးကို အနိုင်ကျင့်တယ် မုဒိန်းကျင့်ပြီးမှ သူတို့က သတ်ဖြတ်လိုက်တာပေါ့။ ဒီအလောင်းတွေကို တွေ့တဲ့ရွာက လူတွေက ကျနော်တို့ကို ပြောပြတာပါ။”
ဘရပ်ဆဲလ် အီးယူတွင်ကျင်းပသော Organization of International Islamic Cooperation (OIC) နှင့် ဟန်ရောင်ဝေ ၏ ယူရိုဘားမားတို့ ရိုဟင်ဂျာအရေးကိုထောက်ခံဆွေးနွေးနေကြစဉ်ပုံ။
ကျနော် ယခု ရေးသား တင်ပြမည့် အကြောင်းအရာမှာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံများမှ ဝင်ရောက် အခြေချ လာသော လူမျိုးခြား တရုပ်၊ ကုလားများ အရေးကိစ္စကို မိမိဥာဏ်မီသမျှနှင့် အတွေ့အကြုံတို့ကို ပေါင်းစပ်ပြီး တင်ပြထား ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ ရေးသားရာ၌ လူမျိုးစွဲ၊ ဘာသာစွဲ အစွန်းနှစ်ဖက်ကို တတ်နိုင်သမျှ ရှောင်ကျဉ်ပြီး ကြိုးစားရေးသား ရာတွင် မိမိနိုင်ငံ၏ အမျိုးဘာသာ၊ သာသနာ အဓွန့်ရှည်ရေးနှင့် အခြားသော လူမျိုးများ၏ ဘာသာ၊ သာသနာကိုလည်း မထိခိုက်၊ မစော်ကား မိစေရန် အထူးဂရုစိုက်ခဲ့ပါသည်။
အဓိက ရေးလိုသည်မှာ လူ့ခွင့်အရေးကို ခုတုံးလုပ်၍ မိမိတို့လူမျိုး၏ မျိုးရိုး ဗီဇကိုဖုံးကွယ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစု ဖြစ်ပါသည်ဟု ယခုတလောတွင် ဆူညံလာသော ရိုဟင်ဂျာ ကိစ္စကို အဓိကထား ရေးသားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ်ကျိုး စီးပွားရှာရန်အတွက် ဆန်ရေ စပါးပေါများသော ကျွန်ုပ်တို့ နိုင်ငံသို့ သာမန် ခိုးဝင်နေထိုင် နေလာလျှင် လက်ခံနိုင်သေး သော်လည်း၊ လိမ်ညာပြီး လူမျိုးရေးအရ တောင်းဆိုလာမှု၊ ဘာသာရေးအရ လွှမ်းမိုး လာမှုများနှင့် မရိုးသားမှုတို့မှာ
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်နဲ့ VOA တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း
ပြည်သူလူထု၏ အသက်၊ အိုးအိမ်၊ စည်းစိမ်၊ ကျွဲနွား အားလုံး ဖျက်ဆီးခဲ့သည့် ဓါတ်ပုံ မှတ်တမ်းများ
October 16 - Nam San Yang Killing Field
(RHQ)Refgees Head Quarter အကြိမ်(၃၂)မြောက် ချစ်ကြည်ရေးပွဲတော်
၂၀၁၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၂၃)ရက်။
(RHQ)Refgees Head Quarter မှ ဦးစီးကျင်းပပြုလုပ်သည့် အကြိမ်(၃၂)မြောက် ဂျပန်တွင် အခြေချ နေထိုင်ကြသည့် ဒုက္ခသည်များ၏ ယဉ်ကျေးမှု ပဒေသာ ကပွဲအခမ်းအနားကို ၂၀၁၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၂၃)ရက်နေ့Shinjuku မြို့ နယ် Bunka Center Hall ၌ နေလည် ၁ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီအထိ အပိုင်း ၂ပိုင်းခွဲကာ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
အခမ်းအနားအစီအစဉ် ပထမပိုင်းတွင် ပွဲဖြစ်မြောက်ရေး စီစဉ်သူ အာရှလူမှုရေးနှင့် ပညာရေး ဖေါင်ဒေးရှင်း ဥက္ကဌ Mr.TAMISUKE Watanuki နှင့် Shinjuku မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Ms. HIROKO Nakayama တို့မှ နှုတ်ခွန်းဆက် အဖွင့် အမှာစကား ပြောကြားပြီးနောက် ဂျပန်နိူင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ နိူင်ငံခြားဆက်ဆံရေးဌာန လက်ထောက် ညွန်မှူး Mr. YOSHIYA Muto ၊ တရားရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန ညွန်ကြားရေးမှူး Mr. SHIGERU Takaya ၊ UNHCR ဂျပန်ကိုယ်စားလှယ် Mr. JAHAN Cels တို့မှ ဧည့်သည်တော်အဖြစ် နှုတ်ခွန်ဆက် အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ကြပါသည်။
ဆက်လက်ပြီး သ၀ဏ်လွှာ ဖတ်ကြားခြင်း ဂျပန်နိူင်ငံတွင် အခြေချနေထိုင်ကြသည့် ဒုက္ခသည် များအတွက် အလုပ်အကိုင် ဖန်တီးအကူအညီ ပေးသည့် ဌာနများနှင့် ဒုက္ခသည် ကူညီ ထောက်ပံ့ သူများတို့ ကိုလည်း ဂုဏ်ပြု မှတ်တမ်းလွှာ ပေးအပ် ချီးမြင့်ခဲ့ပါသည်။ ဂျပန်တွင် အခြေချ နေထိုင်သူများထဲမှ စံပြ အခြေချ နေထိုင်သူ ဒုက္ခသည် (၃)ဦးကိုလည်း ဂုဏ်ပြု လက်မှတ် ချီးမြင့်ခဲ့ပါသည်။
ဒုတိယပိုင်း အခမ်းအနားကို Musashino အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်း ကျောင်းသူများမှ ဘင်ခရာ တီးဝိုင်းဖြင့် တင်ဆက်ပြီး ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားများအဖွဲ့ အစည်း AUN-Japan မှ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြည်ထောင်စုသားများ စုပေါင်းညီညွတ်စွာ နေထိုင်ကြမည့် သရုပ်ဖော်အကကို တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုအသီးသီးတို့မှ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု အကများဖြင့် ကပြဖျော်ဖြေခဲ့ပါသည်။ ထိုနောက် ကမ္ဘောဒီယား ၊ လာအို ၊ဗီယက်နမ် နိူင်ငံအသီးသီးတို့ မှ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု အကပဒေသာများဖြစ် တင်ဆက် ဖျော်ဖြေသွားသည့်အပြင် " ကိုဘူရီနာ "ဆပ်ကပ်အဖွဲ့မှလည်း ကပြတင်ဆက် သွားပါသည်။
အာရှလူမှုရေးနှင့် ပညာရေးဖေါင်ဒေးရှင်း အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး Mr.Shigeo Ishisaki မှ ကျေးဇူးတင် စကားပြောကြားပြီး “မွေးရပ်မြေကို သတိရတယ် ” FURUSATO ဂျပန်ရိုးရာ သီချင်းဖြင့် စုပေါင်းသီဆိုကြပြီး အခမ်းအနားကို ပြီးဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
(၁၂)ကြိမ်မြောက် မြန်မာ့ရိုးရာသီတင်းကျွတ်ပွဲတော် ဂျပန်တွင် ကျင်းပ
(၁၂)ကြိမ်မြောက် မြန်မာ့ရိုးရာ သီတင်းကျွတ်ပွဲတော်ကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်(လွတ်မြောက်နယ်မြေ)ဂျပန်ဌာနခွဲမှ ကြီးမှူး၍ ဒီကနေ့ စက်တင်ဘာ ၂၃ရက်၊၂၀၁၀ တနင်္ဂနွေ နေ့တွင် KIBA ပန်းခြံတွင် မနက် ၁၁း၀၀မှစတင်၍ ကျင်းပခဲ့ရာ မြန်မာရိုးရာ စားစရာရောင်းချသော ဆိုင်ခန်းများ၊ ခေတ်ပေါ် စင်တင်တေးဂီတ တီးဝိုင်းများ စုံလင်စွာဖြင့် စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
ပထမဦးစွာ အတွင်းရေးမှူး ဦးသောင်းမြင့်ဦးမှ သီတင်းကျွတ်ပွဲတော် ကျင်းပတဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ရှင်းလင်း၍ သီတင်းကျွတ် ပွဲတော်အား ဖွင့်လှစ် ပေးခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက် တေးဂီတ ဖျော်ဖြေမှု အစီစဉ်အရ Power 88 Music Band၊ ရွှေသရ၀ဏ် အငြိမ့်၊ တေးချစ်သူများအဖွဲ့၊ မင်္ဂလာဒိုး အနုပညာအင်အားစု၊ I.Y.F တေးဂီတအဖွဲ့၊ Leack Of Freedom တေးဂီတ အဖွဲ့တို့ဖြင့် ဖျော်ဖြေ တင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။
ဆက်လက်၍ ၀၀၃၃ NTT(over seaPhoneCompany)မှ ကံစမ်းမဲ ဖောက်ပေးပြီးနောက် ပွဲတော်ကျင်းပ
ရေးကော်မတီ တာဝန်ခံ အတွင်းရေးမှူး ဦးသောင်းမြင့်ဦးမှ ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားပြီး သီတင်း ကျွတ် ပွဲတော်အား ညနေ ၅း၀၀ရီတွင် အောင်မြင်စွာဖြင့် ရုတ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ ယနေ့မြန်မာ၊ ဂျပန် ပရိတ်သတ် ၆၀၀ ကျော်ခန့် သီတင်းကျွတ် အလွမ်းပြေ လာရောက် အားပေးခဲ့ကြပါသည်။
သတင်းမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ ။ NLD(LA)JB
ရုပ်သံမှတ်တမ်း ။ maungwto၊ Zayyar
Posted by PNSjapan at 10:42 PM0comments
ABMA Journal Volume2No 20